Kutanga kosi | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Kutanga zvidzidzo
Chicken soup ine mudiki kabichi - kosi iri nyore uye ine hutano yekutanga kosi
Zvidyo zvine vechidiki chena kabichi hazvisi zvinonaka chete, asiwo zvine hutano. Muriwo unobva mavitamini akawanda, pamwe ne potassium, zinc, magnesium, iron, fluoride.
Cheese soup nemaseji mukurumidza - kamukira
Sopu inokurumidza uye inonaka yakadaro yakanakira kudya kwemasikati munyika. Kazhinji pazororo rezhizha, hapana chishuwo chekuzvinetsa nekugadzirira ndiro dzakaomarara. Ndinoda chimwe chinhu chakareruka uye chakareruka, chisina chakakosha ...
Mushonga wegorosi nemashira - nokuda kwehutano hwevana nehutano
Mushonga unoshamisa mune zvese maitiro. Inovaka muviri, yakaderera-mafuta, yakanyatso nyudzwa. Inofanira kudzimwa mumenyu yevana nevakuru vakapihwa kurapa kana chikafu chekudya. Mapira ane yakasarudzika yakaoma ...
Inotapira uye ine utano salmon mudumbu soup - chikafu chakakura!
Kudziya hove muto kunogona kubatsira kukupa simba uye kukufadza iwe pazuva rinotonhora. Isu tinopa kuibika kubva mudumbu resaumoni, rinobuda zvisina mutengo, asi rinonaka kwazvo uye riine hutano. Salmon dumbu, saiye ...
Nzira yekubika mukaka sei ne pasta?
Nzira yekuita sei mukaka manoodles muto? Chekutanga, ma noodles madiki anobikwa mune shoma mvura yemunyu, zvino kana yave kuda kubikwa uye mvura inenge yave kufashaidza, durura mukaka. Uyai kune chemota, zvishoma ...
Ndinofanira kudikisa bhari ndisati ndabika kubika here?
Ini ndinofanira kunyudza bhari ndisati ndabika manhanga? unogona kungoikanda pamwe nenyama yacho wobika kwenguva yakati rebei - inozofashaira.Iresipi iri pasuru iri yakanaka chose, asi ruzivo rwunoratidza kuti parera bhari ...
Nzira yekubika sei chikafu chega kabichi? Fresh kabichi
Nzira yekubika sei inonaka kabichi muto? Unofanirwa kubika nyama, muto. Kunakidzwa kwemaawa maviri zvirinani. Zviri nani kubika muto muhuku kana nyama yemombe. Mbatatisi ...
How to cook real Russian soup? Pane misiyano pakati peyakira yeEurope neSiberia here?
Nzira yekubika chaiyo Russian kabichi muto nenzira kwayo? Pane here musiyano uripo pakati pemaEuropean nemaSiberia mabikirwo? http://www.sports.ru/tribuna/blogs/utkin/44550.html edza iyo nzira kubva kuna Vasya Utkin. Ini ndichaita reservation ipapo ipapo - ini handina kuzvibika (mukadzi wangu ...
Nzira yekubika chikafu chinonaka chechi?
Nzira yekuita sei inonaka huku muto? Ini ndichawedzera pane zviri pamusoro. Ita shuwa kuti hapana huta hwemhirizhonga, murazvo mudiki kwazvo. zvikasadaro muto unenge uine makore. Uye isa akati wandei matema ...
Ko yakawanda inofanira kubika mussels, yakaoma here?
Marii yandinofanira kubika mussels yechando? - 2 - 3 maminetsi Mhungu dzakabikwa Tora mamedhi akanyatsogezwa, svina mvura ubve mairi woisa pani yekupisa yakazorwa margarine kana mafuta emuriwo. ...
Nzira yekubika mukaka sei?
Nzira yekubika mukaka muto? Masupu akagadzirwa nemukaka wakazara kana nemusanganiswa wemukaka nemvura. Iwe unogona kushandisa yakanyoroveswa sterilized mukaka usina shuga kana yakazara yakaoma mukaka. Mashuga emukaka anobikwa nepasta ...
Nzira yekubika chikafu chinonaka chehove kumba?
nzira yekubika inonaka muto wehove kumba ?? Isa mvura yacho, udzikise mbatatisi yemota yakanaka uye wedzera munyu, senge mbatatisi yemota hove dzemumagaba mumafuta, kanda hanyanisi nehanyanisi yakachekwa zvakanaka, rega ...
Nzira yekubika mishonga yekodhi isina mazai
Maitiro ekubika maNoodles akagadzirwa asina mazai Dururirai maoodles akagadzirwa akatsamira 100 gramu yeupfu mundiro, wedzera pini yemunyu, 1 tbsp. l. mafuta ezvirimwa uye mudururire mu 3 tbsp. l. mvura inodzika. ...
Vadzimai vevakadzi vane ruzivo vakabatsira! Ndapota tsanangurai zvakajeka kuti mungagadzira sei mapapiro neparera nebhari.
Vashandi vane ruzivo vanobatsira! Ndokumbira utsanangure zvakadzama mabikirwo echiki nekabhero nehuku Tags: nyama muto (31), chiRussia chikafu (35), magaka (3) Mateki ese Pickle nebhari. Photo recipe ...
Chii chinonzi muto chinobatsira?
Ko muto wehuku wakanakira sei? Zvakanaka, kana iwe ukatarisa pamushonga unorwisa mabhakitiriya muhuku uye ukanamatira kune chete muto wemuriwo nekutya, ipapo mubvunzo unomuka. Zvakadii nezve nitrate mu ...
uye nyora recipe ye pike perch soup?
uye nyora recipe ye pike perch hove muto? Diki piki perch, musoro wehanyanisi, 100 magiramu ematomatisi madiki, 150 gramu embatatisi, mhiripiri, munyu, miriwo. Peel iyo pike perch yemukati uye zviyero, geza mushe ...
sei kubika hanyanisi muto? chete nehanyanisi Chekacheka musoro kadiki weonikisi zvakanaka woisa mumafuta emuriwo mupoto. Wedzera chipunu cheupfu hwegorosi, mwaka uye munyu kuravira. Kana…
nguva yakawanda yekubika huku?
zvinotora nguva yakareba sei kubika huku? Ihuku inobikwa nekukurumidza. Sezvo ichivira, bika kwemaminitsi angangoita makumi maviri.Uye zviri nyore kwazvo kutarisa kugadzirira. Tora huku nebanga. Kana iri nyoro uye pasina kubuda ropa, zvino inobikwa. Taki ...
ndiudzei kamupe ye sausage cheese soup
ndiudze mabikirwo esoseji yechizi muto Mumhuri medu, muto une zvakagadzirwa chizi haisi kubudirira, asi ndinouda chaizvo nesoseji chizi. Ini ndinopa iyo recipe sezvo yainge yakadhindwa mune yekutanga sosi - ...
Nzira yekubika muto kubva kuibva kabichi?
Ungabika sei kabichi muto kubva kune nyowani kabichi? Hmm, ini handina kuwana imwechete yakajairika nzira. Pane mumwe munhu angakuudza nhanho nhanho mabikirwo emakabichi ekabichi kubva pane zvinotevera zvinoshandiswa. Nyowani kabichi, mbatatisi, karoti, hanyanisi, matomatisi, ...
Mibvunzo ye74 mu database yakagadzirwa mu 0,545 masekondi.